भारतमा कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या सरकारी तथ्याङ्कभन्दा आठ गुणा बढी! – Health Post Nepal
भारतमा कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या सरकारी तथ्याङ्कभन्दा आठ गुणा बढी!
२०७८ फागुन ५ गते १०:००
काठमाडौं – भारतमा कोभिड-१९ बाट मृत्यु हुनेको संख्या सरकारको आधिकारिक तथ्यांकभन्दा ६ देखि ८ गुणा बढी रहेको बुधबार जारी गरिएको अनुसन्धानले जनाएको छ।
अनुसन्धानमा भनिएको छ कि मृत्युको संख्यालाई कम गरेर कोरोनाको दोस्रो लहरको भयावह प्रभावलाई कम देखाउने प्रयास गरिएको छ। कोलकाताबाट निस्कने अंग्रेजी पत्रिका ‘द टेलिग्राफ’मा यो समाचार प्रमुख रूपमा छापिएको छ।
यस अध्ययनमा नोभेम्बर २०२१ को शुरुवातसम्म ३०.२ लाखदेखि ३०.७ लाख मानिसको कोभिडका कारण मृत्यु भएको बताइएको छ। जबकि आधिकारिक तथ्यांकमा मृत्यु हुनेको संख्या करिब ४ लाख ६० हजार रहेको छ।
एक फ्रान्सेली शैक्षिक संस्थाका डेमोग्राफर क्रिस्टोफ गुइलमोटोका अनुमान अनुसार जुलाई २०२१ सम्ममा कोभिडका कारण ३०.२ लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो। यो संख्या क्यानडाको टोरन्टो विश्वविद्यालयका इपिडिमियोलोजिस्ट प्रभात झाको नेतृत्वमा एक टोलीले गरेको अध्ययनबाट प्राप्त अनुमानित संख्या बराबर छ।
गुइलमोटोले चार फरक-फरक क्षेत्रहरूमा कोभिडका कारण भएको मृत्युलाई प्रयोग गरेर आफ्नो अध्ययन तयार गरेका थिए। केरलामा भएका मृत्यु, भारतीय रेलका कर्मचारी, विधायक-सांसद र कर्नाटकमा विद्यालयका शिक्षकहरूको भएको मृत्युको अध्ययन गरेर राष्ट्रव्यापी मृत्युको अनुमान गरिएको छ।
अध्ययनको यो अनुमान सही भएमा भारत सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने देश बन्नेछ। अहिलेसम्म अमेरिकामा कोभिड संक्रमणबाट ८ लाखभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने ब्राजिलमा ६ लाखको मृत्यु भइसकेको छ। यी देशहरू सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेको सूचीमा सबैभन्दा माथि छन्।
उक्त पत्रिकासँगको कुराकानीमा स्वास्थ्य विज्ञहरुले विभिन्न डाटाबेसको विश्लेषणात्मक अध्ययन गरिएका यस्ता अध्ययन जसमा मृत्युको संख्यालाई केन्द्रको तथ्यांकले कम देखाएको दाबी गरिएको छ यसले थप चिन्ता बढाएको बताएका छन्।
भारतमा कोभिडका कारण हुने मृत्युदर विश्वका अन्य देशको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा कम छ। सरकारी गणना अनुसार, प्रति १ हजार जनसंख्यामा कोभिडको मृत्युदर ०.३ प्रतिशत छ, जबकि विश्वको औसत मृत्युदर ०.६ प्रतिशत छ।
यदि अध्ययनमा आएकोजस्तो ३०.२ लाख देखि ३०.७ लाख सम्मको तथ्यांक सही साबित भयो भने भारतको मृत्युदर २.३ देखि २.६ हुनेछ जुन विश्वव्यापी औसत ०.६ भन्दा झन्डै चार गुणा बढी हुनेछ।